Jose Mourinho :Ma aaminsani in Lionel Messi nagu soo biiri doono | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jose Mourinho :Ma aaminsani in Lionel Messi nagu soo biiri doono
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa meesha ka saaray warar sheegayay in kooxdiisu ay ka mid tahay kooxaha doonaya saxiixa Lionel Messi oo shaki la ganinayo mustaqbalkiisa Camp Nou, laakiin Mourinho ayaa cadeeyay in Man United ayna wax fursad ah u haysan in ay kula soo wareegto Messi. Mourinho ayaa sheegay in mustaqbalka Messi uu yaalo Barcelona.
“Waa sheeko isku mid ah xili ciyaareed kasta. Wargaysyadu waxay markasta ku doodaan in Messi uu baxayo,laakiin waligeed may dhicin marka dhamaadka la soo gaadho. Daacad ahaantii, Anigu waxaan rajaynayaa in aanu Messi bixin, sababtoo ah waxa uu leeyahay Barcelona, isagana Barcelona ayaa iska leh”.Mourinho ayaa sidaa yiri.
Xidiga reer Argantina ayaa ka abuuray gudaha kooxda Barcelona cabsi aad u xoogan xiliyadii lasoo dhaafay, taasoo ku aadan kadib markii uu uu xaqiijiyay madaxweynaha kooxda diidmadii uu iska diiday xidigan in heshiiska uu u kor dhiyo kooxda reer Catalania.
Arintaas waxay walwal iyo walaac ay ka dhax abuurtay gudaha garoonka Cump Nou, gaar ahaan marka ay soo baxeen in durbaba ay dooneyso saxiixiisa kooxda reer Egland ee Manchester City, kuwaasoo horey u sheegay in xidigan ay ka soo gudbin doonaan dalab aad u xoogan, isla markaana ay siin doonaan mushaar waali ah.
Sida ay daboolka ka qaadeen wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka Spain gaar ahaan kuwa sida aadka ah ugu dhaw kooxda Blaugrana ayaa waxay ugu dambeyn daboolka ka qaadeen in madaxweynaha kooxda reer Catalania Josep Maria Bartomeu, uu ku jiro dadaalo uu ku bixinayo sida uu Lionel Messi ku sii joogi lahaa garoonka Cump Nou.